Kuchengeta Wiricheya Yako Mumamiriro Akanaka - Chengeta Chigaro Chakachena
Kana iwe ukashandisa wiricheya, inofanirwa kugara ichichengetwa zvakanaka kuve nechokwadi chekuti unofamba wakachengeteka. Kuva nechengetedzwa-zvakanaka wiricheya inowedzera zvakanyanya ruzivo rwevashandisi uye nekudaro vanofanirwa kuchengetwa zuva nezuva kana vhiki svondo zvakanyanya.
Pane nzira shoma dzekuchengeta yako wiricheya mumamiriro akanaka ekushanda. Chekutanga uye chakakosha, chengeta yakachena. Kuchenesa kwakakosha sezvo kuchideredza mikana yako wiricheya kuita ngura kana kuve neruvara.
Kuchengeta Sachigaro Wako Wakachena
Ndichiri kuchenesa yako wiricheya, iwe uchaona kuti ndeapi nzvimbo anoda kutarisisa uye ungangoda kuisa muodha yezvikamu. Ukaona chimwe chinhu chinokanganisa kuchengetedzeka kwako, ita kuti mumwe munhu agadzirise ipapo ipapo. Kana iwe uchikwanisa kugadzirisa iwe pachako, izvo zvirinani zvirinani.
Paunenge iwe wapedza yako yenguva dzose yekuchengetedza cheki, iwe unozogona kuona chero zvikamu zvinoda kuchinjwa. Gara uchishandisa unhu zvikamu kutsiva zviripo zvasakara zvikamu, nenzira iyoyo iwe unowedzera hupenyu hwako wiricheya uye dzivisa chero kuputsika kusiri madikanwa mune ramangwana.
Kunaka kweako wiricheya
Kunze kwekugadzirisa iyo kugadzirisa yako wiricheya, iwe unogona zvakare kuwedzera zvishongedzo izvo zvichawedzera mukunyaradza uye nyore kweako wiricheya. Mamiriro ari nani ako wiricheya iri mukati, iwe unofara uye wakasununguka iwe. Unogona kufamba wakasununguka uye uine chivimbo.
Kuchengetedza yako wiricheya mukushanda kwakanaka kurongeka kunogona kureva zvinhu zvinoverengeka, kubva pakugadzirisa, kuchenesa, kugadzirisa kusvika pakuwedzera zvishongedzo. Iwe unogona kuwedzera zvishongedzo zvekuwedzera kune zvaunorerukirwa paunenge uchienda kunovhakacha, zvishongedzo senge chinobata nzimbe, chinomwira chinwiwa, bhegi, parasol, iwe unozonzwa wakasununguka kuziva kuti iwe une zvese zvauchada pamunwe wako.
Unogona kuenda chero kupi, kungave mukati kana kunze, uine chivimbo nekuti iwe unoziva kuti yako wiricheya iri mukushanda kwakanaka. Unogona kunakidzwa nekubatana munharaunda kwaunowanzoita, kubva kushanyira shamwari nemhuri kana kungoenda kuchitoro.
Kuteedzera yakapusa asi ine nzira yekugadzirisa chirongwa cheako wiricheya zvinokuchengeta iwe uchifara uye uine chivimbo paunenge uchiita zvako zvezuva nezuva maitiro. Izvo hazvina kunonoka kuisa a wiricheya chirongwa chekuchengetedza pamwechete uye chiise mukuita.